Otu esi akwụsị iso ndị ọzọ na Instagram | Nzukọ mkpanaka
Otu esi emebe ndị ọzọ na Instagram
Ebe ọ bụ na Facebook zụtara Instagram, netwọkụ mmekọrịta nke onyonyo nri etoola nke ukwuu, na -enweta mmasị nke ọtụtụ nde mmadụ ma tinye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ Facebook n'ihe egwu. Dị ka netwọkụ mmekọrịta ọ bụla, Instagram na -enye anyị ohere isoro ndị ọzọ na ndị ọzọ na -eso anyị.
Site n'oge ruo n'oge, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịsachapụ Instagram, ya bụ, lelee ọnụọgụ ndị mmadụ wee kwụsị ịgbaso akaụntụ Instagram, ọkachasị akaụntụ ndị ahụ anaghị etinye anyị uru ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otu esi emebe ndị ọzọ na Instagram, kedu uru na ọghọm ya, a na m akpọ gị oku ka ị gaa n'ihu na -agụ ya.
Etu esi lelee akụkọ Instagram na ntanetị
1 Nzuzo karịa ihe niile
2 Ihe kpatara na ị naghị eso na Instagram
3 Etu ị ga -esi eso ya na Instagram
3.1 Kwụsị iso na mkpanaka na Instagram
3.2 Otu esi eso akaụntụ Instagram site na mkpanaka gị
3.3 Kwụsị iso PC na Instagram
3.4 Otu esi eso akaụntụ na Instagram site na PC gị
4 Otu esi ewepụ ndị na -eso ụzọ na akaụntụ Instagram anyị
Nzuzo karịa ihe niile
Instagram, dị ka netwọkụ mmekọrịta ọ bụla ọzọ, na -enye anyị ohere amachi oke akwụkwọ anyị, na -edobe profaịlụ nkeonwe. N'ụzọ dị otu a, ọ nweghị onye na -abụghị gburugburu anyị, yana na anyị enyebeghị ikike iso anyị, ị ga -enweta akwụkwọ anyị.
Ịme atụmatụ a nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma iji mechie ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nwere ike ịhụ ọkwa gị, na mberede, jikwaa onye na -enweta ọdịnaya gị yana onye anaghị enweta. Ị ga -eburu n'uche na ọ nweghị usoro na -arụ ọrụ ma a bịa n'ịlele profaịlụ nkeonwe na Instagram.
Etu esi ewepu "ahuru" na Instagram
Ihe kpatara na ị naghị eso na Instagram
Onye ọ bụla maara ihe kpatara ha ji achọ hichaa akaụntụ ndị sochirinụ. Isi ihe kpatara ya na -emetụtakarị ụdị ọdịnaya ị na -ebipụta. Ọ bụrụ na ọ masịrị ọdịnaya ya n'agbanyeghị na ị malitere iso ya maka nke ahụ, ọ naghị egbu oge ịgbanwe obi gị wee kwụsị iso ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike lelee akwụkwọ ha oge niile ịhụ ma ọ bụrụ na akaụntụ ahụ na -atọ ụtọ ọzọ dịka mgbe ị malitere iso ya.
Ihe ọzọ nwere ike inyere gị aka ịbelata ọnụ ọgụgụ akaụntụ ị na -eso bụ ma ọ bụrụ n'ezie na -ewetara gị ihe. Ọtụtụ bụ ndị ọrụ na -eso akaụntụ ndị ọzọ n'ihi na ọ na -enye ha ụdị ọ bụla ozi nke uru ọ bụla. Ọ bụrụ na akaụntụ ahụ ị malitere ịgbaso akwụsịla ịba uru ma ghara iwetara gị ihe ọ bụla, ọ bụ ezigbo ihe kpatara ịkwụsị iso ya.
Nhọrọ nke Instagram na -enye anyị, nke dịkwa na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ, bụ ohere nke zoo ozi sitere na akaụntụ anyị na -eso. Nhọrọ a dị mma na akụkọ gbasara ezinụlọ na ndị enyi anyị bidoro ịgbaso iji mee ka afọ ju onwe ha nakwa na ha echeghị na a gbahapụrụ ha.
Ọ bụrụ na akaụntụ ị na -eso na -ebipụta nnukwu ozi kwa ụbọchị gbasara ihe ọ bụla ọ na -eme, na -enye mmetụta na ọ bi n'elu ikpo okwu a, na -ejuputa usoro iheomume anyị na posts na -abaghị uru na enweghị mkpa, ị kwesịrị ịtụle ịkwụsị iso ya.
Etu ị ga -esi eso ya na Instagram
Na agbanyeghị mkpali kpaliri gị ime mkpebi ịkwụsị iso otu ma ọ bụ karịa ndị ọrụ na Instagram, lee usoro ị ga -eso kwụsị iso akụkọ n'elu ikpo okwu a.
Kwụsị iso na mkpanaka na Instagram
Ozugbo anyị mepere ngwa ahụ, anyị na -esite na usoro iheomume anyị na anyị na -achọ mbipụta ikpeazụ nke akaụntụ ahụ na anyị chọrọ ịkwụsị iso.
Na-esote, pịa na isi ato dị n'akụkụ aha gị n'elu ikpo okwu.
Site na nhọrọ dị iche iche egosipụtara, anyị na -ahọrọ nhọrọ Ekwela.
Mgbe ịpị bọtịnụ a, ọ nweghị ozi nkwenye ga -egosipụta, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlaghachi soro akaụntụ Instagram, anyị ga -eme usoro m ga -egosi gị n'okpuru.
Otu esi eso akaụntụ Instagram site na mkpanaka gị
Pịa na iko na -eto eto dị na ala nke ngwa ahụ ma anyị ewebata aha akaụntụ anyị chọrọ iso.
Anyị na -ahọrọ aha akaụntụ ahụ na ndepụta nsonaazụ ọchụchọ ahụ weghachitere anyị wee pịa ya Soro bọtịnụ.
Kwụsị iso PC na Instagram
Ozugbo anyị abanyela na webụsaịtị Instagram wee banye ozi akaụntụ anyị, anyị na -achọ usoro iheomume anyị ikpeazụ post nke akaụntụ na anyị chọrọ ịkwụsị iso.
Ka ịkwụsị iso akaụntụ sitere na ihe nchọgharị, pịa ya akara ngosi nke onye nwere nlele dị n'aka nri nke bọtịnụ Zipụ Ozi.
N'ime nhọrọ atọ ọ na -enye anyị, anyị na -ahọrọ Kwụsị iso.
Otu esi eso akaụntụ na Instagram site na PC gị
N'igbe ọchụchọ dị n'elu, anyị na -abanye aha onye anyị chọrọ iso.
Site na nsonaazụ niile egosiri, pịa akaụntụ na -amasị anyị.
Na-esote, pịa bọtịnụ ahụ na-eso.
Kedu ihe kpatara Instagram anaghị arụ ọrụ? 9 ihe mere na ihe ngwọta
Otu esi ewepụ ndị na -eso ụzọ na akaụntụ Instagram anyị
N'adịghị ka nyiwe ndị ọzọ, na Instagram anyị nwere ike wepu ndị niile na -eso anyị mana anyị achọghị ka ha gaa n'ihu na -eme ya na -enweghị mkpa igbochi ha ka ha na anyị wee ghara inwe mmekọrịta ma ọ bụ hụ akwụkwọ anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchịkwa ọnụ ọgụgụ ndị na -eso anyị si otú a na -egbochi oke akwụkwọ anyị, anyị ga -etinyerịrị profaịlụ na nzuzo wee kpochapụ ndị niile na -eso anyị mana na -enweghị mmasị ka anyị gaa n'ihu na -eme ya.
Site n'ime ka profaịlụ anyị bụrụ nkeonwe, ọ bụrụ na ha chọrọ iso anyị ọzọ, ha ga -ezitere anyị arịrịọ, arịrịọ anyị nwere ike ịjụ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otu esi ewepụ ndị na -eso ụzọ na akaụntụ Instagram, ị ga-emerịrị usoro ndị a:
Ozugbo anyị mepere ngwa mkpanaka Instagram, anyị nweta profaịlụ anyị.
Na-esote, pịa na Ndị na-eso ụzọ.
Mgbe ahụ ọ bụ ga -egosi onye ọ bụla na -eso ụzọ na anyị nwere na akaụntụ anyị.
N'aka nri nke ọ bụla, E gosipụtara bọtịnụ nhichapụ. Site na ịpị bọtịnụ a, ngwa ahụ ga -ajụ anyị ka anyị kwenye na -eme mgbanwe a na ndepụta ndị na -eso ụzọ anyị. Ọ bụrụ na anyị doro anya, pịa Hichapụ.
Site ugbu a gaa n'ihu, akaụntụ ahụ ga -akwụsị iso anyị, yabụ akwụkwọ anyị ha ga -akwụsị igosi na usoro iheomume gị. Naanị otu ị ga -esi nweta akwụkwọ anyị ọzọ, ọ bụrụ na profaịlụ anyị ka bụ nke ọha, bụ iziga anyị arịrịọ ọzọ ma ọ bụ chọọ anyị n'elu ikpo okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Otu esi emebe ndị ọzọ na Instagram
Otu esi abawanye nchekwa ekele maka ikikere faịlụ na ndekọ aha na Gnu / Linux